IBiblioCAD, khuphela iibhloko ze-AutoCAD kunye nezicwangciso-zeGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/BiblioCAD, khuphela i-AutoCAD ibhloko kunye nezicwangciso
IBiblioCAD yindawo enenombolo yexabiso leefayile ezilungele ukukhutshelwa. Ungasombulula ngokulula xa usenza iprojekthi okanye usinike imibono emitsha ngendlela yokuyiphuhlisa. Masibone ezinye iimeko:
Sithatha inkcukacha yesikhangu se-zunchada esinqununu, sinombono we-isometric, sinqunywe kwaye sityalo.
Sidinga iibhloko zabantu, imithi okanye izityalo
Iprojekthi epheleleyo yezakhiwo ezininzi, ekukhuthazayo
Isiteji esinokuhamba esikhatywayo kwi-3 ubukhulu
Ngamafutshane, le mizekelo nje, kwaye ukuba ubone apha ndishiye isampuli:
Ngubani ongafuni khuphela umephu we-dwg kwesi sakhiwo sokuhlala esiphezulu, esingazibandakanya kuphela izicwangciso zomgangatho kodwa ukuchithwa kunye nemibono.
Jonga le projekthi yoyilo lwedolophu. Nangona uphuhliso luvela eColombia, kunokuba luncedo ukucinga ukuba sifuna ukuba imveliso yethu ijongeka kanjani xa usebenza a Isicwangciso soCwangciso loThutho.
Kukho iifayile kwifom ye vector njenge-dwg, max, i-3Ds, kodwa enye i-PDF kunye nezinye iifom.
Ityala leenkcukacha zokwakha liyasebenza, njengoko oku ngokubanzi kungadingi sikali sinyanzelekileyo kwaye nolungelelwaniso olunokubakho lunokusetyenziswa kwakhona. Njengomzekelo endiwubonisayo… ukonga ixesha kuyamangalisa.
Ngokuqinisekileyo, eyona nto intle malunga neBiblioCAD lixabiso lomxholo owabiweyo. Kulungile ukukhuphela iifayile ezaneleyo ukuze zigcinwe kwindawo yethu yokugcina izinto; kungekudala okanye kamva sinokuyidinga. Kananjalo ngenxa yokuba ezi ndawo zihlala zinyamalala ubusuku bonke kwaye zisishiya sizisola ngokungazisebenzisi.
Ndiyathanda ukukhangela kwindawo, zombini kunye nokhangelo lwamagama aphambili kunye nolawulo oluphezulu lwamacandelo. Nje ukuba kukhethwe, iindidi ezincinci zinokukhethwa; umzekelo wesibini endiwubonisayo uyilo lweDolophu, kodwa iindidi zayo apha ngamazwe; iluncedo kakhulu. Kwangokunjalo, ukuba besinokukhangela imithi nezityalo, amacandelo aphantsi aya kuba yi-2D, 3D, njl.
Zonke Izicwangciso zokukhuphela I-BiblioCAD ihlelwe ngale ndlela, ndiyishiye inxalenye yoluhlu lwamacandelo ukuze ndibone inani lomxholo apho:
Izixhobo zasedolophini (445)
Amagumbi okusebenzela (297)
Ukugquma kwe-Acoustic (5)
Imisebenzi yendlela - iiveve (886)
Iifama kunye ne-inst. ezolimo (188)
Iipaki, ukuhamba kunye negadi (686)
Imithi nezityalo (1,001)
Umatshini womoya (270)
Amanzi kunye namachibi okubhukuda (i-221)
Ezemidlalo kunye nokuzonwabisa (699)
Iinkcukacha zokwakha (2,523)
Ukudweba nge-AutoCAD (217)
Ukufakelwa kwamashishini (917)
Iindlela zokuthutha (1,685)
Uyilo lweedolophu (1494)
Izixhobo zetitshala (i-4,583)
Iinkqubo zokwakha (394)
Ukukhanyiswa kombane (319)
Imilinganiselo yokwakha (i-255)
Izinto zeendawo (186)
IBiblioCAD ayisosiza sokukopa umxholo wabanye abantu kwaye sibonise ukuba sesethu, kwaye asivumelekanga ukuba silayishe izinto ezingezizo ezethu. Okuncinci kakhulu yindawo yokuthengisa eyakho AutoCAD ivimbaNangona kunjalo, kufanelekile ukuba uqaphele ixabiso elongeziweyo elinikezelwa eluntwini ngokunikezelwa kwezixhobo ezinje ngale inikezelwa yile ndawo. Ewe akukho nto isimahla kobu bomi, ukugcina iwebhusayithi kwi-Intanethi kubiza imali, ke ukuze ukhuphele iifayile ezingaphandle kodidi SIMAHLA, kufuneka wabelane ngeefayile zakho, ezisinika iikhredithi zokufikelela kukhuphelo.
Kukho izicwangciso zenyanga zokuhlawula, ukusuka kwi-$ 20 kwinyanga okanye kwi-2.77 nyanga zonke xa kuthengwa ukubhaliswa kweminyaka emithathu ye-US $ 100.
Iinkcukacha ezimangalisayo kwiibhloko ze autocad.
Isicwangciso seNdlu i-Autocad Ukudweba
juan max uthi:
Ndingathanda ukuba undixelele nendlela kwaye ndingayilanda ngayo iibhloko ze-autocad ze-Autocad 2010
kwi arq.com.mx ubafumana
VICTOR SALGADO uthi:
Unqwenela ukukhuphela iiplani ezinika ithuba elingcono.
uhlaziye eli phepha
UWilly Rocha uthi:
Kukho izicwangciso ezilungileyo kakhulu ezisetyenziswa kakhulu. Kwaye sisixhobo esiluncedo kakhulu. enkosi……..
Kungenzeka ukuba abakwazi ukuvulwa ngenguqu oyisebenzisayo. Uya kufuneka uyiguqule usebenzisa i-AutoDesk True Converter, ikhululekile kwaye uyikhuphela kwiphepha le-Autodesk.
Ukukhuphela kwe-CAD akungandivuli Ndine 2006 okanye ngaba kuphela umzobo ubonakala? umntu undixelele nceda
Ndiya kuqonda ukuba uya kundixelela apho ndiyakwazi ukukhuphela i-autocad block kwi-3d Ndifuna ukugqiba umsebenzi
RAMON AYALA BLANCAS uthi:
Ukuba ndingathanda ukukhuphela iiplani zokuthabatha iingcamango kunye negalelo zam izicwangciso zam ukwenzela ukuba abanye abasebenzisi benze okufanayo, mhlawumbi ndineengcinga ezilungileyo umntu angasebenzisa
JOEL VILLALOBOS uthi:
khuphela ii-blocks zamahhala
khuphela i block
ERIKA YAZMIN VILLANUEVA TELLEZ uthi:
i crown iris solano uthi:
Zintle kakhulu zonke iindiza